गौडा - उनका महान कार्यहरू जस्तै कासा बाटल्ली | को माध्यमबाट यात्रा Absolut यात्रा
अन्टोनी गौडे एक महान आर्किटेक्ट र स्पेनी आधुनिकतावादको उच्च प्रतिनिधि थिए। त्यस्तै, उसले हामीलाई एक महान विरासत छोड्छ जुन तपाईंले आज भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ ताकि उहाँको कार्यहरूको प्रशंसा गरिरहनुहोस्, जसले तपाईंलाई थाँहा दिँदैन जुन हामीलाई थाहा छ। तिनीहरू मध्ये एक कासा बट्टे हो तर यसमा अरू धेरै छन् जुन हामीले कि त थाहा पाउनु पर्छ वा थोरै नजिक जानु पर्छ।
तसर्थ, हामीले एउटा बनाउन छनौट गरेका छौं प्रतिभा को सबै भन्दा प्रतीकात्मक र काल्पनिक कामहरु को माध्यम बाट भर्चुअल यात्रा। ती सबैको व्यक्तिगत, रचनात्मक र काल्पनिक समापन छ जसले तिनीहरूलाई एक अनुपम परिणाम दिन्छ। केहि चीज जुन यसलाई एक अत्यन्त व्यक्तिगत आधुनिकतावादको रूपमा चित्रित गर्दछ। प्याक गरौं किनकि हामी यात्रा मा जाँदै छौं!
1 एन्टोनी गौडा द्वारा गरिएको सगरडा फिमेलिया
2 Batlló घर
4 कासा भिक्न्स
5 गौडीको क्याप्रिको
6 बूटीज हाउस
एन्टोनी गौडा द्वारा गरिएको सगरडा फिमेलिया
बार्सिलोनामा अवस्थित बसिलिका सबैभन्दा भ्रमण गरिएको कार्यहरू मध्ये एक हो, र यसको निर्माण १ 1882२ मा शुरू भयो, संसारको सबैभन्दा अग्लो चर्चहरू मध्ये एक हुन। यद्यपि उहाँसँग धेरै छन्, हामी भन्न सक्छौं कि यो उहाँको उत्कृष्ट कृति हो। यसले उनलाई आफ्नो जीवनका धेरै वर्षहरू समात्यो र यससँगै, उहाँ आफ्नो नैतिक जीवनको अन्तिम चरणमा नै प्रकृतिवादी युगमा पुग्नुभयो, जहाँ यो माथिका सबै कुराको एक सारांश हुनेछ। नियो-गोथिकमा रहेको क्रिप्टको अंश बाहेक मन्दिरको सब भन्दा ठूलो जैविक शैलीमा गरिएको थियो। ज्यामितीय आकारको अभाव हुन सक्दैन, न प्रकृतिसँग समानताहरू अभाव हुन सक्छ। यदि तपाईंले अहिले सम्म भ्रमण गर्नुभएको छैन भने, तपाईं यो प्रतीकात्मक भेटघाट मिस गर्न सक्नुहुन्न एन्टोनी गौडा!
यस अवस्थामा हामी बार्सिलोनाको पासेओ डे ग्रासियामा रहेको भवनको पुनःनिर्माणको बारेमा कुरा गर्दैछौं। हामी भन्न सक्दछौं कि हामी गौडको प्रकृतिवादी युगमा छौं, जहाँ उसले आफ्नो व्यक्तिगत शैलीलाई सिद्ध तुल्यायो र उनको प्रेरणा प्रकृतिबाट आएको हो। त्याे भनेपछि, कासा बाटलीको भ्रमण तपाईंको इन्द्रियका लागि उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हुन सक्छ। किन? ठिक छ, किनभने भ्रमण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिनौरल ध्वनि वा गति सेन्सरहरूको लागि अत्यधिक अन्तर्क्रियात्मक हुन सक्छ। अर्को शब्दहरुमा, गौडाको संसारमा आफूलाई समाहित गर्ने एउटा तरिका, उसले के देख्यो वा हेरे जुन उनले अडियोभिजुअल कार्यक्रम मार्फत महसुस गरे। यो एक अनौंठो अनुभव हो जसले प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ कि जस्तै उनको प्रेरणा के हो, कसरी प्रतिभाको कल्पना सिर्जना गरियो र सबै थोकले उहाँलाई घेर्यो।
यस भ्रमणमा तपाई यी सबै र अधिकमा प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। तपाईले एक इमर्सिभ कोठा पाउनुहुनेछ जसमा तपाईले एक हजार भन्दा बढी स्क्रीनहरूको मजा लिनुहुनेछ। तिनीहरुमा तपाईं यसको सुरुवातको बारेमा यसको सबै रहस्यहरू फेला पार्नुहुनेछ 'गौड डोम' मा। तर केवल देख्न मात्र पर्याप्त हुनेछ, तर सबै भन्दा राम्रो ध्वनि 21 को अडियो च्यानल तपाईं प्रकृति को भावना कब्जा र निश्चित रूपमा, भोल्यूमेट्रिक अनुमानहरु, जहाँ जादू वास्तविक भन्दा बढी हुनेछ को लागी धन्यवाद दिन्छ।
यसको शुरुवात वा यसको उत्पत्तिबाट आनन्द लिइसकेपछि यो गौडीको दिमागमा प्रवेश गर्ने समय हो। केहि वास्तवमै जटिल देखिन्छ! तर गौडा क्यूबको साथ, यो हासिल हुनेछ। नयाँ कोठा जहाँ यसमा--पक्षीय LED घन छ। यसको साथ तपाईं वास्तविकताको सबै धारणा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, यसले तपाईंलाई अर्को विश्वमा, कल्पनामा लैजान्छ, तर सँधै इन्द्रियको साथ मद्दत गर्दछ, हामी जेनिसको दिमागभित्र छौं भनेर बिर्सनु हुँदैन। अवश्य पनि, यसको लागि यसको पछाडि एउटा विस्तृत अनुसन्धान कार्य थियो। रेखाचित्रहरूको चयन गरियो, साथै लेखहरू वा फोटोहरू र अन्य सामग्री जुन कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहयोगमा यस परियोजनालाई जीवन दिन्छन्। हामी उसको आँखा र उसले संसारमा छोडेको छापले वास्तविकता देख्नेछौं।
हामी कहिले प्रवेश गर्दैछौं Batlló घर, हामी केहि रमाईलो गर्नेछौं उसको जीवनको अनुमानहरू, हाँटेरियरको छविहरू र यी सबै उहाँको समयको यात्रा गर्ने तरिका हो। अर्को नवीनता भनेको केवल चित्रकलाको नजिक जानुपर्दा, मोशन सेन्सरहरू जुन तिनीहरूमा स्थापना हुन्छन् साना फिल्म निर्माणहरू सुरू गर्दछ, जसले घर र परिवार नाभिकको बारेमा अधिक जानकारी पत्ता लगाउँदछ। आफ्नो सबै विरासतको मजा लिन समाप्त गर्न तर पहिलो व्यक्तिमा, यसलाई एक जादुई अनुभव बनाउनु जरुरी छ, कम्तिमा, जीवनमा एक पटक। के तपाईं यसको आश्चर्य पत्ता लगाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
बार्सिलोनाको उत्तरपश्चिममा माउन्ट कार्मेलोमा, हामी फेला पार्दछौं पार्क Güell, जो गौडीको अर्को प्रसिद्ध प्रख्यात कार्य हो। जब हामी उसलाई देख्छौं, हामी जान्दछौं कि ऊ पनि प्रकृतिवादी युगमा प्रवेश गर्दछ र ऊ एकदम व्यक्तिगत शैलीमा रमाउँछ। यसमा हामी स्यान साल्भाडोर डे होर्टा फाउन्टेन वा जोन सेल्स दृष्टिकोणको रूपमा सबैभन्दा विशेष कुनाहरू फेला पार्न सक्छौं, जहाँबाट तपाईं बार्सिलोनाको मनोरम दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। पहिले नै केवल प्रवेश द्वार वा पवेलियनहरूमा, हामी पहिले नै अलौकिक शैलीको सबैभन्दा शैलीको आनन्द लिन सक्छौं। अर्को ठाउँहरू जुन पनि भ्रमण गरिनु पर्दछ र यदि तपाईंले पहिले नै त्यसो गर्नुभयो भने, यस क्षेत्रको वरिपरि हिंड्ने कहिँ हर्ट गर्दैन।
यद्यपि सबै वास्तुकार परियोजनाहरूको पछाडि तिनीहरूको महत्त्व र सफलता छ, यस मामलामा जब हामी कुरा गर्छौं कासा भिक्न्स, हामीले यो बुझाउनु पर्छ कि यो वास्तुकलाको अध्ययन पछि उनले गरेका पहिलो कामहरू मध्ये एक थियो। त्यसो भए सम्भव भएमा यसले अझ बढी मान पनि थपेको छ। यस कारणले गर्दा हामी यसलाई प्राच्य कालखण्डमा राख्न सक्छौं, किनकि यसमा ती प्राच्य ब्रश स्ट्रोकहरू छन् कि गौडिको शुरुका वर्षहरूमा यति धेरै भावुक थिए। एउटा भवन जसलाई सांस्कृतिक चासोको साइट घोषित गरियो र पछि २०० 2005 मा एक विश्व विरासत साइट। यसले सिरेमिक फिनिशका लागि धन्यवाद, यसले हामीलाई अनुहारको भागमा ठूलो र colors्गको साथ छोड्दछ।
यद्यपि यो सत्य हो कि उनका धेरै जसो कामहरू क्याटालोनियामा अवस्थित छन्, यस अवस्थामा हामीले कुरा गर्नुपर्नेछ क्यान्ट्याब्रियाको कमिलाहरुमा परेको एउटा 'लुक'। यो गौडिको पूर्वी अवधिमा पनि फ्रेम गर्नुपर्नेछ, जहाँ सिरेमिक टाइल मेहराब र ईटको अलावा मुख्य पात्र हो। जस्तो तपाईलाई पक्कै थाहा छ, यस भवनलाई संग्रहालयमा परिणत गरिएको थियो, किनकि यो आश्चर्यजनक छैन। केवल अनुहारको रमाईलो गरेर, यसले तपाईंलाई मोहित पार्नेछ!
हामीले एल क्याप्रिकोको साथ ढोका खोलिसक्यौं, ऊ पनि राम्ररी पछ्याइरहेको छ Botines हाउस। किनकि यो ती भवनहरू मध्येको हो जुन कातालोनिया बाहिर र अझ विशेष गरी लेनमा छ। आधुनिकतावादी मूल को, यो एक गोदाम साथै जीवनको पहिलो वर्षहरूमा एक निवास थियो। तर १ 1969। In मा यो पहिले नै सांस्कृतिक चासोको ऐतिहासिक स्मारक घोषित भइसकेको थियो, जुन १ 1996 XNUMX restored मा पुनर्स्थापित भइरहेको थियो। आज यसले संग्रहालय पनि राखेको छ तर यार्डियरको सौन्दर्य, गौडको सार र उसको प्रतिभाको प्रतिबिम्ब पनि राख्छ। तपाईं कुन भ्रमण गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » कासा बाटली र अन्य ठूलो कार्यहरू जुन तपाईंले भ्रमण गर्न सक्नुहुने जीनियस गौडीको हो